Diyaarad uu la socday Uhuru Kenyatta oo Hawada Somalia soo gashay iyo Ethiopianka oo weeciyey jihaddii Diyaaraddaas – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Diyaarad uu la socday Uhuru Kenyatta oo Hawada Somalia soo gashay iyo Ethiopianka oo weeciyey jihaddii Diyaaraddaas
Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxayso xurguf Diplomaasiyadeed oo soo kala dhex gashay Dowladaha Ethiopia iyo Kenya oo ku aadan sababihii kallifay in Diyaarad waday Madaxweyne Uhuru Kenyatta dib looga celiyo Hawada Ethiopia.
Wargeyska The Standard Media ayaa qoray in la ogaaday inay Hay’adda Duulista hawada ee Ethiopia kula talisay Duuliyaha Diyaaraddii waday Uhuru Kenyatta inuu bedelo Khadka Hawada ee uu ku duulayey, si aysan Diyaaradda u gelin Hawada dalka Yemen oo ay Diyaaradaha Dagaalka ee Isbahaysiga Sacuudiga ka digeen inaysan Diyaaradaha Rayidka adeegsanin.
Diyaaradda Madaxweyne Uhuru la socday ayaa la sheegay inay mar kale u weecatay Hawada Somalia, kadib, markii ay Saraakiisha Waaxda Duullista Hawada ee Ethiopia cosadeen in la beddelo Jihadda Duullimaadka.
Diyaaradda ayaa soo gashay Hawada Somalia, ka hor intaysan dib ugu laabanin Garoonka Jomo Kenyatta International Airport ee magaalladda Nairobi oo ay Diyaaradda markii hore ka soo duushay.
Diyaaradaasi ayaa la sheegay inay Hawada ku jirtay muddo 4 saacadood, iyadoo saacadiiba jaraysay masaafo dhan 800 oo KM.
Duulliyaha ayaa la sheegay inay ku adkaatay inuu helo Khad Duullimaad oo toos uu ku tegi lahaa dalka Imaaraadka Carabta, si uu Madaxweyne Uhuru Kenyatta uga sii raaco Diyaarad kale oo ku sii jeeday dalka Maraykanka.
Wararka qaarkood ayaa sheegay inay Diyaaradda la soo gudboonaatay cillad farsamo, oo khatar gelin lahayd nolosha Uhuru Kenyatta.
Dhinaca kale, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenya ayaa u yeertay Safiirka Ethiopia uga wakiilka ah Kenya, Dini Mufti,waxayna u gudbiyeen qoraal cabasho ah oo ku aadan arrintaasi.
Horey, waxay Dowladda Kenya cabashada noocaasi u gudbiyeen Safiirka Eritrea u jooga Nairobi, kaasi oo iska fogeeyey inay Dowladiisa u diiday Diyaaraddii waday Uhuru Kenyatta inay dulmarto Hawada dalkiisa.
Dhageyso:warka subaxnimo ee Radio Dalsan ,12-05-2015